gwara mmanụ ịkpọpu njikọ, ZOP-52 (1.5-16 / 16-150)
Mkpuchi Idupu njikọa na-eji na ala voltaji ABC Gịnị na gwara mmanụ aluminum eduzi aka 6 KV.
Ndị na-esonụ IPC nwere wider nso nke ngwa oru karịa ndị ọzọ na Jera si IPC.
Nke a njikọ dị nnọọ inogide na mfe maka echichi na efe n'elu bundled edoghi, n'okporo ámá àmụmà na ụlọ. Ndi-achọ silicone mmanu, waterproofed.
Adabara isi ma ọ bụ alaka ụlọ ọrụ na-eduzi na aluminum ma ọ bụ ọla kọpa wires, nke na-etinyere na-efefe n'elu echichi, n'oge ala voltaji ụtụ magazin connective.
Nka na ụzụ spefication:
Main akara, mm2
Alaka akara, mm2
Echichi nke a ala voltaji njikọ dị mfe n'ihi na nke ala n'akụkụ nkpirikpi, nke kwesịrị ekwesị maka fixation site spana.
Low voltaji gwara mmanụ Idupu njikọta agafeela ule dị ka EN 50483, ọrụ ahụmahụ na okpomọkụ sitere na site - 60 ° C ruo +60 ° C ule, okpomọkụ ịgba ígwè ule, merela agadi ule, corrosion eguzogide ule wdg
IPC na-mere nke UV eguzogide thermoplastic, nwere tin kpuchie ezé, na anaghị agba nchara ngwaike
Ahịa anyị gosipụtaworo elu àgwà nke a LV ABC kwesịrị ekwesị.
Ọzọ Idupu njikọta na ala voltaji cable oyiyi akwadị ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ.
Jera bụ a obi ike soplaya n'ihi na ala voltaji akara ngwa. The cable echichi set maka LV ABC ewu na-agụnye: gwara mmanụ Idupu njikọ, erughị ala mwekota, erughị ala mgbodo, osisi nko, nkwusioru mwekota, nkwusioru mgbodo, ọrụ ma ọ bụ airdac mwekota, mgbidi mounts, cable lugs na njikọ, igwe anaghị agba nchara gbalaga, igwe anaghị agba nchara buckles, na ABC ngwaọrụ.
Anyị nwere dum kit nke cable ngwa maka mkpa a.
Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị nwere ihe ọmụma
Previous: Anchor ịghasa pigtail ụdị PS-7
Osote: Eye kwesịrị insulator EF-16
cable ịkpọpu njikọ
Gwara mmanụ Idupu njikọ
Gwara mmanụ ịkpọpu njikọ ZOP-52
Low voltaji cable mwekota
ala voltaji cable oyiyi akwa
Low voltaji gwara mmanụ Idupu njikọta
ala voltaji ụtụ magazin connective
Iferi USB gwara mmanụ ịkpọpu njikọ, ZOPN-120
Service mwekota STB